Semalt: वेब ब्राउजर एक्स्टेन्शन के हो - तपाईंको लागि Best उत्तम वेब एक्सटेंशनहरू!
वेब ब्राउजर विस्तार प्लगइन हो जुन फायरफक्स, इन्टरनेट एक्सप्लोरर, गुगल क्रोम, र अन्य ब्राउजरको कार्यक्षमता विस्तार गर्दछ। केहि ब्राउजर एक्सटेन्सनहरू वेब टेक्नोलोजीहरू जस्तै जाभास्क्रिप्ट, CSS, र HTML प्रयोग गरेर लेखक हुन्। एप्लिकेसन प्रोग्रामिंग ईन्टरफेस (एपीआई) र मेशीन कोडहरू जस्तै पीपीएपीआई र एनपीएपीआई प्रयोग गरेर ठूलो संख्यामा वेब विस्तारहरू विकास गरिएको थियो। सब भन्दा प्रसिद्ध वेब ब्राउजर विस्तार तल छलफल गरिएको छ।
१. डाटा सेभर
डाटा सेभर नेट मा एक राम्रो र सबै भन्दा प्रसिद्ध ब्राउजर विस्तार हो। यदि तपाईंसँग विभिन्न साइटहरूबाट डाटा स्क्र्याप गरिएको छ र यसलाई पढ्न योग्य र स्केलेबल फारममा बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यो एक्स्टेन्सन स्थापना गर्नु पर्छ तपाईंको कामको लागि। डाटा सेभरको साथ तपाई डाटालाई कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ र ब्यान्डविथ बचतको मजा लिन सक्नुहुन्छ। यो ओपेरा, क्रोम र सबै अन्य वेब ब्राउजरहरूसँग उपयुक्त छ, र नि: शुल्क क्रोम एड-अनको रूपमा कार्य गर्दछ। डाटा सेभरले तपाईंको डाटा प्रदर्शन गर्न अघि यसलाई कम्प्रेस गर्न गुगल अन्तर्क्रियात्मक सर्भरहरू प्रयोग गर्दछ। सुरक्षा उपायको रूपमा तपाईले पृष्ठहरू HTTPS र क्रोमको इन्कग्निटो मोड मार्फत पहुँच गर्नुपर्छ।
२. एडब्लकर अन्तिम
AdBlocker Ultimate को साथ, असीमित समयको लागि अनावश्यक विज्ञापनहरू रोक्न सम्भव छ। यो इन्टरनेटमा एक उत्तम र सब भन्दा शक्तिशाली वेब ब्राउजर विस्तार हो। AdBlocker Ultimate एक सित्तै र खुल्ला स्रोत विस्तार छ कि तपाईं प्रायोजक वा मार्केटिंग विज्ञापन ब्लक गर्न को लागी यो सजिलो बनाउँछ र तपाईंको प्रयोगकर्ता अनुभव एक हदसम्म सुधार गर्दछ। यस विस्तारको सब भन्दा विशिष्ट सुविधाहरू मध्ये एक यो फायरफक्स र क्रोम दुबैसँग उपयुक्त छ र तुरुन्तै इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
पाब्लो एक नि: शुल्क विस्तार हो र कलात्मक सामाजिक मिडिया-मैत्री-क्याप्शन फोटोहरू कोब्बल गर्न डिजाइन गरिएको हो। तपाईं यो एक्स्टेन्सन क्रोम वेब स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, र पाब्लो सबै सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइटहरू जस्तै लिंक्डइन, ट्विटर, Google+, फेसबुक, र इन्स्टाग्रामसँग उपयुक्त छ। यसले तपाईंलाई पाठ स्निपेटहरू हाइलाइट गर्न र दुबै स्थानीय र अनलाइन स्रोतहरूबाट छविहरू चयन गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं सजिलैसँग प्रभावहरू, स्वरूपण र पाब्लोको साथ तपाईंको फोटोहरूको फन्टहरू अनुकूलन गर्न सक्नुहुनेछ।
Privacy. गोपनीयता ब्याजर
कहिलेकाँही प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो गोपनीयता र इन्टरनेटमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्। साधारण वेब अनुप्रयोग वा ब्राउजर विस्तारको साथ, तपाईं आफ्नो कार्यहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्न। तर गोपनीयता ब्याजर अन्य समान वेब एक्सटेन्सनहरू भन्दा धेरै उत्तम छ। यो इलेक्ट्रोनिक फ्रन्टियर फाउन्डेशन द्वारा इजाजतपत्र छ र धेरै समय को लागी गरीएको छ। यो अन्य गोपनीयता उपकरण वा विज्ञापन ब्लकर भन्दा धेरै राम्रो सुविधा र सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। तपाईं गोप्यता ब्याजर व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा घोस्टरी र एडबल्क प्लसजस्ता विस्तारहरूको साथ संयोजनमा। तपाईं सजिलै अनावश्यक विज्ञापन रोक्न सक्नुहुन्छ र इन्टरनेटमा अज्ञात रूपमा कार्य गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गरेर।
बुमेरांग जीमेल आधारभूत र उन्नत प्रकार्यहरूमा उत्कृष्ट थप हो। यो वेब ब्राउजर एक्स्टेन्सनले तपाईंलाई ईमेल सन्देशहरू अनुसूचित गर्न र केही अनावश्यक कार्यहरू स्थगित गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं आफ्नो समय ब्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ र यस प्रयोगकर्ता-मैत्री विस्तारको साथ एक पटकमा बहु कार्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ। यो क्रोम वेब स्टोरमा तत्काल डाउनलोडको लागि उपलब्ध छ।